ဒုက္ခသည်များ စိစစ်ရန်၊ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်သွားရန် အသင့်ရှိဟု ပြည?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံ တော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့် ဆွေသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံကာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်များစိစစ်ရန်၊ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်သွားရန် အသင့်ရှိဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး H.E.Mr.Abdul Hassan Mahmood Ali ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရနိုင်ငံတော်အတိုင် ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေသည် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒါကာမြို့သို့အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိသွား ရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းခရီးစဉ်အပေါ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဌာနက အောက်တိုဘာ ၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရီးစဉ်တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့် (၂.၁ဝ.၂ဝ၁၇) ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကာ မကြာမီကရခိုင်ပြည်နယ်၌ နေထိုင်သူများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုများအား ဖြေရှင်းရေးကိစ္စနှင့်စပ် လျဉ်း၍ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအမြင်ခြင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကို ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး H.E.Mr.Asad uzzaman Khan၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပြည် ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှအဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ကြ ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင်ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေကနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၁၉. ၉.၂ဝ၁၇)ရက်နေ့ပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်များအား စိစစ်ရန်နှင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သွားရန်အသင့်ရှိ ကြောင်းကို ထပ်လောင်းအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစ၍ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိ အိမ်ထောင်စု ၄၆၉၉၃ စုမှ လူဦး ရေ ၂၃၆၄၉၅ ဦးအား ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ဝဝဝ ပြည်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးမှ ရရှိခဲ့သည့်နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်အတိုင်း ကွဲကွာနေသောမိသား စုများနှင့်ကျန်ရှိနေသော မိသားစုဝင်များကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရမှ အသိမှတ်ပြုသော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့် ဆွေကပြောကြားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ ထို့အပြင်အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံ အကြားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များကိုနှစ်နိုင်ငံစလုံး၏အကျိုး စီးပွားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၍နှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်းသွားနိုင်မည်ဟုခိုင်မာစွာယုံကြည်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တည်ရှိသည့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအလေးထား ကြောင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါ ကြောင်း၊ (ARSA)အားမြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏ဘုံရန်သူအဖြစ်ခံယူကြောင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ်လုံးဝလက်မခံသည့်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော် တင့်ဆွေကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်လုံခြုံ ရေးဆိုင်ရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်အစီအစဉ်များ၊ နှစ်ဖက်သ ဘောတူထားသည့်သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လိုသည့် ဒုက္ခသည်များ စိစစ်ရေး၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်သို့လာ ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးကလည်း ဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုအစည်းအ ဝေးအပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးက နေ့လယ်စာဖြင့်တည် ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကာ အဆိုပါနေ့လယ်စာစားပွဲကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးလည်း တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလာရောက်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးကျော်ဆွေ၏ဖိတ်ကြားစာကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့် ဆွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးက ၎င်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှပြန်ရောက်လျှင် လမ်းညွှန်ချက်ခံယူပြီး လာမည့်ရက်ကို အသိပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
မူဆယ်မြို့ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်တွင် မီးမိန်းခုံ ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြစ်ရာမှ မီးလောင်